एसईईको परिक्षामा करिश्माको सफलताFilmyFanda: Nepal's No. 1 Entertainment news portal site
एसईईको परिक्षामा करिश्माको सफलता
फिल्मी फण्डा । नेपाली फिल्मकी सदावहार नायिका करिश्मा मानन्धरले यस वर्ष एसईईको परिक्षा दिएकी थिइन् । मैतीदेवीमा रहेको त्रिवेणी माध्यमिक विद्यालयबाट १० कक्षा अध्ययन गरेकी उनको परिक्षा केन्द्र विजय स्मारक मा.वि. डिल्लीबजारमा परेको थियो भने आज उक्त परिक्षाको परिक्षाफल प्रकाशित भएको छ ।
लाखौँ विधार्थीहरुको साथ नायिका करिश्मा मानन्धरले प्रतिक्षा गरिरहेको यस बर्षको एसईईको परिक्षाको परिक्षाफल आज प्रकाशित भएको छ । करिश्मा मानन्धरले ‘बी’ प्लस ल्याएकी छिन् भने उनले ३ जीपीए ल्याएकी छिन् । उनले ‘बी’ प्लस ल्याउँदै एसईईको परिक्षामा सफलता पाएकी छिन् ।